Cristiano Ronaldo wuxuu gaaray goolashiisii 399 ee Real Madrid ee ma ahan 400….(Ogoow sababta) – Gool FM
Cristiano Ronaldo wuxuu gaaray goolashiisii 399 ee Real Madrid ee ma ahan 400….(Ogoow sababta)
Byare May 3, 2017
(Madrid) 03 Maajo 2017. Kaddib saddexleydii uu xalay dhaliyay Cristiano Ronaldo, saaafadda ayaa shaacisay inuu gaaray goolashiisii 400-aad ee Real Madrid, laakiin sheekadu sidaa ma ahan oo wuxuu dhaliyay 399-gool.
Buugaagta lagu diiwaan galiyo rikoodhada ayaa ku qoran in Ronaldo uu dhaliyay 399, haddaba maxay tahay sababta loo shaaciyay inuu gaaray goolashiisii 400-aad.
Jawaabta su’aashan ayaa u laabaneysa 7-sano ka hor kaddib gool uu Ronaldo ka dhaliyay kooxda Real Sociedad.
Goolka ayaa ahaa laad xor ah ama waxa afka qalaad loogu yeero Free kick, balse laadkii kululaa uu soo tuuray Ronaldo ayaa ku dhacday Pepe sidaana ku dhalatay.
Ciyaartaas kaddib Pepe ayaa saxaafadda u sheegay inuu goolka dhaliyay Ronaldo oo uusan isagu dhalin, yeelkeede xiriirka kubbada cagta Spain ayaa goolka u diiwaan galiyay Pepe waana goolkaas midka qura ee Ronaldo iminka uga dhiman inuu gaaro goolkiisii 400-aad ee Real Madrid.
Haddaba ogoow oo maanka ku haay goolasha Ronaldo uu u dhaliyay Madrid waa 399 ee ma ahan 400 oo gool.
"Ma joojinayno goolal dhalinta" - Marco Asensio